Shakhsi Ahaan Loogu Sameeyo Adduun Caan Ah | Martech Zone
Meelaha tafaariiqda ee maanta la tartamayo, waxay bixisaa adeegyo shaqsiyeed oo kala duwan oo loogu talagalay dagaalka si loogu soo jiito dareenka macaamiisha. Shirkadaha guud ahaan warshadaha waxay ku dadaalayaan inay soo bandhigaan khibrad macmiil oo la xasuusto si loo dhiso daacadnimo iyo ugu dambeyntii hagaajinta iibka - laakiin way ka sahlan tahay in la yiraahdo intii la qabtay.
Abuuritaanka khibrada noocan ah waxay u baahan tahay qalab si aad wax uga barato macaamiishaada, u sameysato xiriiro aadna u ogaato nooca dalabyada ay xiiseynayaan, iyo goorta. Waxa si isku mid ah muhiim u ah waa in la ogaado waxa dalabyadu aysan khuseyn, si looga fogaado xanaaqa ama ka fogaanshaha macaamiishaada ugu daacadsan.
"Saddexda A" ee Dhisida Xiriirka
Dhisida xiriirka macaamiisha tafaariiqda waxaa loo kala qaadi karaa saddex tallaabo: afku, hawlgelinta iyo waxqabad.
Helida - waa wax walba oo ku saabsan helitaanka dareenka macaamiisha ee alaabooyinka iyo helitaanka macaamiil cusub, taas oo macnaheedu yahay in lala gaaro iibsadayaasha suurtagalka ah suuq ballaaran iyadoo la adeegsanayo suuqgeyn firfircoon, iskaashi kanaal, xayeysiis iyo dalabyo.
Furitaanka - Tafaariiqdu waxay diiradda saareysaa sidii macaamiisha ay u fulin lahaayeen tallaabo gaar ah ama ay u raaci lahaayeen dariiq la doonayo oo kordhiya qiimaha macaamiisha. Tan macnaheedu waxay noqon kartaa booqashada dukaanka dhowr jeer oo la bixiyay bil kasta, dhammaystirka nooc gaar ah oo macaamil ganacsi ah ama kordhinta wacyiga dalabyada kala duwan. Ujeedada wajiga firfircoonaanta ayaa ah isdhexgalka macaamiisha ee astaanta, taasoo u saamaxeysa tafaariiqleyda inay la macaamilaan iyaga oo dhisaan xiriir.
Activity - wajiga ugu dambeeya waa halka barnaamijyada iyo faa'iidooyinka daacadnimadu ka soo galaan.
In kasta oo wejiga koowaad ee dhismaha xiriirku uu ku saleysan yahay wacyigelin ballaaran, labada weji ee ku xiga dhammaantood waxay ku saabsan yihiin shakhsi ahaaneed. Sida kaliya ee hawlgallada iyo wejiyada hawshu ugu guuleysan doonaan waa haddii macaamilku dano gaar ah ka leeyahay dalabkan ama badeecada.
Haddii shay lagu taliyay ama dalab la soo jeediyay uu calaamadda ka maqan yahay, maxay u hawl galayaan? Dareenkan Analytics u noqo aalad qiimo badan tafaariiqleyda kuwaas oo doonaya inay lashaqeeyaan dalabyada iyo inay daacad u noqdaan macaamiishooda.
Falanqaynta waxay awood u siisaa tafaariiqleyda inay si fudud ula socdaan waxa soo bandhigaya ee la jaan qaadaya rajadooda taas oo aan sameynayn, ugu dambeyntiina awood u siineysa inay baabi'iyaan dalabyada aan khuseynin, gaarsiinta ficil-celinta oo ay u noqdaan ilo lagu kalsoonaan karo oo macluumaad iyo wax soo saar u leh macaamiil kasta.
Dukaameystayaashu waa mashquul, haddii ay ogaadaan hal nooc ayaa si rasmi ah u gaarsiin doona waxa ay rabaan iyagoo ku saleynaya iibsiyada iyo danaha hore, taasi waa astaanta ay u socdaan.
Ku Shaqeynta Xogta
Haddaba qalab noocee ah ayaa loo baahan yahay si suuragal looga dhigo dhisidda xiriirkan?
In kasta oo inta badan suuqleyda iyo ururadu ay marin u helaan xog aad u tiro badan - mid dhaqameed iyo mid bulsho labadaba - waa loolan joogto ah oo xagga macdanta ah, kor loo qaado qaybaha macaamiisha ugu muhiimsan ugana falceliyaan waqtiga dhabta ah baahida macaamiisha. Maanta caqabadaha ugu badan ee ururada la kulmaa waa inay yihiin ku hafato xogta oo gaajo u noqoto aragti. Xaqiiqdii, ka dib markii la sii daayay sahankii ugu dambeeyay by CMOSurvey.org, Agaasimaheeda Christine Moorman ayaa faallo ka bixisay in mid ka mid ah caqabadaha ugu waa weyn ay tahay in aan la sugin xogta laakiin taa badalkeeda laga abuuro aragtiyo wax ku ool ah oo laga helo xogtaas.
Markay suuqleydu ku hubaysan yihiin qalabka falanqaynta saxda ah, si kastaba ha noqotee, xogta weyn waxay noqon kartaa fursad badan. Waa xogtaan oo u oggolaaneysa suuqleyda tafaariiqda inay ku guuleystaan ​​guusha wajiga firfircoonida iyo waxqabadka ee dhismaha xiriirka - kaliya waxay u baahan yihiin inay ogaadaan sida loo shaqeeyo. Ugu fiicnaanta isku darka ganacsiga, xogta iyo xisaabta si loo soo saaro fikradaha ku saabsan sida macaamilku ula dhaqmi karo dalab la siiyay ama isdhexgalka ayaa ka dhigaya adduunyo kala duwanaansho shirkaduhu inay ka shaqeeyaan hagaajinta bartilmaameedkooda iyo shaqsiyeynta.
Falanqeyntu waxay u suurta galisaa suuqleyda inay macno u yeeshaan waalida xogta maanta jirta iyo inay si dhab ah ugu soo hagaagaan meelahaas, taas oo iyana ka caawinaysa dhisida daacadnimo iyo dakhli.
Hal nooc oo tafaariiq ah halka ay tan si cad uga muuqaneyso waa dukaamada. Barnaamijyada moobiilka, nalka iyo teknoolojiyada kale waxay soo saaraan daadad xog ah oo ku saabsan safarka dukaanka macaamiisha. Tafaariiqleyda casriga ah iyo noocyada ayaa adeegsanaya Analytics in laga baaraandego xogtaas waqtiga-dhabta ah lana soo saaro dalabyo khuseeya oo macaamiisha dhaqaajinaya kahor intaysan ka bixin bakhaarka.
Tusaale ahaan, Noocyada Hillshire waxay awood u leeyihiin inay la socdaan dukaamada dukaamada iyagoo adeegsanaya iBeacons, iyaga oo u oggolaanaya inay u soo diraan xayeysiis loo habeeyay iyo rasiidh loogu talagalay farshaxanimadooda markay dukaamaysigu ku soo dhowaado qaybta bakhaarka.
Wax qarsoodi ah maaha in maanta tafaariiqda adduunka ay ka tartan badan tahay sidii hore. Dhisida daacadnimada macaamiisha ayaa diirada saaraya noocyada ugu sareeya, sida kaliya ee ay ku guuleysan doonaanna tan waa inay lashaqeeyaan macaamiishooda.
Ma dhici doonto habeen keliya, laakiin markii si habboon loo wajaho, dukaamada tafaariiqdu waxay awood u leeyihiin inay run ahaantii dhigaan xogtooda macmiil si ay ugu shaqeeyaan si ay si fiican ugu fahmaan shaqsi kasta baahidiisa iyo dookhiisa. Macluumaadkani waa fure u ah hagaajinta shakhsi ahaaneed, xiriirka macaamiisha iyo ugu dambeyntiina qadka hoose ee shirkadda.
Tags: afkuhawlgelintaActivityxayawaanxog weyncmosurveydaacadnimada macaamiishasumadaha buurahajeexjeexabaalayaalSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkadukaamadashopping
Anigoo ah Aasaasihii iyo Gudoomiyihii LatentView, Venkat waa aragtida ka dambeysa LatentView. Wuxuu ka caawiyay dhowr macaamiisha Fortune 500 inay ka faa'iideystaan ​​moodeel gaarsiinta adeegyada dibedda ee Hindiya ee adeegyada maaliyadeed iyo qaybaha isgaarsiinta muddo toban sano ah. Wuxuu in ka badan 18 sano khibrad u leeyahay la-talinta maareynta, tikniyoolajiyadda iyo maareynta adeegyada IT-ga adduunka.